(၂၁)ရာစုနှစ်အတွင်း မကြာမှီကာလတွင် ကြယ်တာရာတခု ပေါက်ကွဲနိုင်သည်ဆိုသောသတင်း။ « MMWeather Information BLOG
« နောက်ထပ်လူတွေနေနိုင်သည့် ကမ္ဘာတခုလော အောက်ပိုင်းမှ ပြဿနာရှာခြင်း »
(၂၁)ရာစုနှစ်အတွင်း မကြာမှီကာလတွင် ကြယ်တာရာတခု ပေါက်ကွဲနိုင်သည်ဆိုသောသတင်း။
By heronaing, on January 28th, 2011
ကြယ်တာရာ ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုကြောင့် ကမ္ဘာကြီးသည် ရက်သတ္တပတ်
အနည်းငယ်ခန့် နေ့ချည်းသက်သက် ဖြစ်ပေါ်နေရန် အချိန်နီးကပ်လာပြီဟု
သြစတြေးလျ ပညာရှင်များ ပြောကြား။
ကယ်တာရာ ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုကြောင့် ကမ္ဘာကြီးသည် ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်ခန့် နေ့ချည်းသက်သက် ဖြစ်ပေါ်နေရန် အချိန်နီးကပ်လာပြီဟု သြစတြေးလျ ပညာရှင်များ ပြောကြား
တူးဝန်းဘား ၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၂
ကမ္ဘာ့နက္ခတ်တာရာ ပညာရှင်များသည် သမိုင်းတင်ပြီးခေတ် နောက်ပိုင်း ယနေ့ ၂၁ ရာစုအတွင်း အာကာသဆိုင်ရာ အထူးခြား ဆန်းကြယ်ဆုံး သတင်းတစ်ပုဒ် အဖြစ် ကမ္ဘာကြီးအတွက် ဒုတိယမြောက် နေလုံးတစ်ခု ပေါ်လာပြီး နေ့ညကွဲပြားခြင်း ခေတ္တရပ်ဆိုင်းသွားနိုင်သည် ဆိုသော သတင်းကို သြစတြေးလျ သတင်းဌာနမှ တစ်ဆင့် ကမ္ဘာသို့ ဇန်န၀ါရီလ ၂၂ ရက်နေ့က တင်ပြခဲ့သည်။
၄င်းတို့၏ စောင့်ကြည့်လေ့လာချက်များအရ ကမ္ဘာ့ကောင်းကင်မှ မြင်ရသော ကြယ်ကြီးများထဲတွင် အဌမအကြီးဆုံး အနီရောင် ကြယ်ကြီး ဖြစ်သည့် Betelgeuse သည် ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ရန် စွမ်းအင် မကြာမီ ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်အတွင်း ကုန်ဆုံးတော့မည် ဖြစ်ပြီး ယင်းကဲ့သို့ စွမ်းအင်များ ကုန်ဆုံးသွားချိန်တွင် ဆူပါနိုဗာ (Supernova) ခေါ် ကြယ်တာရာ ပေါက်ကွဲမှုတစ်ရပ် ဖြစ်ပွားမည် ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ ဆူပါနိုဗာ ပေါက်ကွဲသော အခါ နဂါးငွေ့တန်းတစ်ခုစာ အကျယ်အ၀န်းအထိ တောက်ပသော အလင်းတန်းများ ဖြာထွက်လာမည် ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာမြေသည် ၄င်းဖြစ်စဉ်မှ အလင်းရောင်များ ရရှိနေမည် ဖြစ်သောကြောင့် နေ့နှင့်ည လည်ပတ်မှု ဖြစ်စဉ် ယာယီ ပြောင်းလဲကာ နေ့အဖြစ် ဖြင့်သာ ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်ခန့် တည်ရှိနေမည်ဟု ပညာရှင်များ ခန့်မှန်းထားကြသည်။ ထိုအချိန်တွင် အဆိုပါ အလင်းတန်းများ ထွက်ပေါ်နေသော ကြယ်စုကြီးသည် ကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်မှ ကြည့်လျှင် ဒုတိယ နေတစ်လုံးကဲ့သို့ မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းတွင် မြင်တွေ့ရဖွယ် ရှိသည်ဟု ကြားသိရသည်။
မကြာမီ ကြယ်တာရာ ပေါက်ကွဲမှုကြီး ဖြစ်တော့မည်ဟု ပညာရှင်အချို့က ပြောဆိုနေကြသော Betelgeuse ကြယ်ကြီး
“အခုဆိုရင် ဒီကြယ်အိုကြီးဟာ သူ့ရဲ့ အလယ်ဗဟိုမှာ မီးစာကုန် ဆီခန်း ဖြစ်နေ ပါပြီ။ သူ့ကို ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ လောင်စာ စွမ်းအင်တွေ ကုန်သွားရင် အလွန်လျင်မြန်စွာ ပြိုပျက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု သြစတြေးလျနိုင်ငံရှိ ကွင်းစ်လန်းတောင်ပိုင်း တက္ကသိုလ်မှ ပညာရှင် ဘရက် ကာတာမှ အဆိုပါ သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ရေးသားထားခဲ့သည်။
၄င်းက ခန့်မှန်း တွက်ချက်ရာတွင် ထိုဖြစ်ရပ်သည် ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနှစ်များအတွင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ နေ့ညမကွဲပြားဘဲ နေ့အသွင်ဖြင့် တည်ရှိနေခြင်းသည် အနည်းဆုံး ရက်သတ္တပတ် နှစ်ပတ်ခန့် ကြာမြင့်နိုင်ကြောင်း ပြောပြခဲ့သည်။
၄င်း Betelgeuse ကြယ်နီကြီးသည် ကမ္ဘာမြေမှ အလင်းနှစ် ၆၄၀ အကွာအဝေးတွင် တည်ရှိသော Orion ကြယ်စုတွင် ပါဝင်ပြီး ကမ္ဘာမှ သာမန်မျက်စိဖြင့်ပင် တွေ့မြင်နိုင်သလို လာမည့် ကြယ်တာရာ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်စဉ်ကိုလည်း နေကာမျက်မှန်များ အသုံးပြု၍ ကြည့်ရှုရန် မလိုကြောင်း၊ မကြာမီ အချိန်ကာလ အတွင်း၌ ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသား တို့သည် ကမ္ဘာ့နက္ခတ်တာရာ နှင့် အာကာသဆိုင်ရာ သမိုင်းတွင် နှစ်သန်းပေါင်းများစွာမှသာ တစ်ကြိမ် ကြုံတွေ့ရနိုင်သော ဆူပါနိုဗာ တစ်ခုမှ အလင်းကြောင့် ညမရှိတော့ဘဲ ရက်သတ္တပတ် အတန်ကြာ နေ့အဖြစ်သာ တည်ရှိနေခြင်းကို မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်တွေ့ရဖွယ် ရှိကြောင်း အဆိုပါ သတင်းများအရ သိရှိရသည်။
Ref: AOL , Daily Mail, The New American
သိပ္ပံဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ, ဆောင်းပါး « နောက်ထပ်လူတွေနေနိုင်သည့် ကမ္ဘာတခုလော အောက်ပိုင်းမှ ပြဿနာရှာခြင်း »
4 comments to (၂၁)ရာစုနှစ်အတွင်း မကြာမှီကာလတွင် ကြယ်တာရာတခု ပေါက်ကွဲနိုင်သည်ဆိုသောသတင်း။
Log in to Reply	ကမ္ဘာပေါ်က အချို့ သော အကြောင်းအရာတွေဟာ ရှင်းပြ နိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေမဟုတ်ကြပါဘူး။ ဥပမာ – Stonehenge နဲ့ Easter Island တို့လိုပေါ့။ သေချာရှင်းမပြနိုင်တဲ့ အရာတွေ အဖြစ် ယနေ့ထိ ရှိနေဆဲပါ။ သူတို့ကို ဘယ်သူတည်ဆောက်ခဲ့တယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်လို ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှရာနှုန်းပြည့် မပြောနိုင်ပါဘူး။ Easter Island က သြစတေးလျ နဲ့ ချီလီ အကြားက ပစိဖိတ် ရေပြင်ကျယ်ကြီး အလယ်လောက်မှာရှိတာ၊ ဘယ်တုန်းကများ ရှေးဟောင်းလူတွေ ရောက်ပြီး ဒါတွေ လုပ်သွားလဲ.. ကျနော်လည်း အံ့သြော မိပါတယ်)။ ကျနော်အခုရှင်းပြမယ့် အကြောင်းအရာကလည်း သေချာ ရှင်းမပြ နိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုပါ။ ကမ္ဘာ ကြီးပျက်မယ့် နေ့စွဲကို ပြောတာပါ။ အဲဒီ နေ့စွဲက ၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့လို့ ပြောလိုက်တဲ့ အတွက် ကျနော့်လိုပဲ ခင်ဗျားလည်း အံ့အားသင့် သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် NASA နဲ့ Governments တွေကတော့ အံ့အားသင့်မယ် မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူတို့ဟာ ၁၉၈၃ ခုနှစ်ကတည်းက ဒီအကြောင်းကို သိနေကြ နှင့်ပြီးသားဖြစ်နေလို့ပါ။ ဘာကို သိနေကြ တာပါလဲ။ အခုဘယ်သူတွေက ကျနော်တို့ ကမ္ဘာနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး သတိပေးခဲ့သလဲ ဆိုတာ ကြည့်ကြရအောင်ပါ။
Nostradamus ကပြောပါတယ်၊ စကြာဝဠာအတွင်းက ကြီးမားလှတဲ့ အရာဝတ္ထုတစ်ခုဟာ ကျနော်တို့ ကမ္ဘာဆီကို ဦးတည်ပြီး လာနေပါတယ်။ သူ့ရဲ့ နေပါတ်လမ်းဟာ
နှစ်ပေါင်း ၃၆၀၀ မှာ တစ်ပါတ် ပြည့်ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ကျနော်တို့ ဆီကို ရောက်ပါမယ်၊ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာကို ဝင်တိုက်မိမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Albert Einstein က pole shift နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး သတိပေး ခဲ့ပါတယ်။ pole shifting အချိန်မှာ လူသားတွေ အပြင်းအထန် ခံစားရမယ် ဆိုတာပါ။ မာယန် ပရောဖက် တွေရဲ့ The Tzolkin ဆိုတဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ဟာ အဆုံးသတ် အမှတ် ဖြစ်နေပါတယ်။ စက်ဝန်းကြီး တစ်ခုရဲ့ အဆုံးမှတ် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ စက်ဝန်းကြီးက အစမှတ် (day 0.0.0.0.0) 11th August 3114 BC မှာ စတင်ပြီး အဆုံးမှတ် (day 13.0.0.0.0) 21st December 2012 AD မှာ ဆုံးပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၃၆၀၀ ပြည့်တိုင်း စက်ဝန်းကြီး တစ်ပါတ်လည် ပါတယ်။ holy bible ကလည်း 2012 ခုနှစ်ကို သတိပေးထားပါတယ်။ အခြားအခြား သော အရာတွေအားလုံးမှာလည်း 2012 December 21 ကို ရည်ညွှန်းထားတာတွေ တွေ့ရပါတယ်။
မေးခွန်းတစ်ခု ရှိပါတယ်။ ၂၀၁၂ မှာ သေချာပေါက် ဖြစ်မှာမှန်း သိရက်နဲ့ ဘာကြောင့် နာဆာက လူတွေကို အသိမပေးတာလဲ။ သူတို့ဟာ ကမ္ဘာပေါ်က လူသားတွေ အားလုံး သိသွားကြရင် လူတွေ အားလုံး အသက်ရှင် ကျန်ရစ်ရေး ကြိုးပမ်းကြတဲ့ အခါ သူတို့ အတွက် အခွင့်အလမ်း နည်းသွားမှာ စိုးလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဖော်ပြမဲ့ အကြောင်းအရာက NASA ဟာ ၁၉၈၃ ခုနှစ်က ဘယ်တွေ့ရှိချက်ကို လျှို့ဝှက်ခဲ့တာလဲ ဆိုတာပါ။ 1982 ခုနှစ်မှာ NASA ဟာ extra solar planet တစ်ခုကို စပြီး သတိထား မိခဲ့ပါတယ်။ 1983 ခုနှစ်မှာ NASA ဟာ IRAS (Infrared Astronomical Satellite) ကို လွှတ်တင်ခဲ့ပြီးတော့ အဲဒီ satellite က ဂျူပီတာဂြိုဟ်လောက် ကြီးမားတဲ့ object တစ်ခုကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ Object ကို Planet X (Nibiru) လို့ နာမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ planet Nibiru ဟာ ကမ္ဘာနဲ့ နေရဲ့ အကြားကို ဝင်ရောက် ဖြတ်သန်း ပါမယ်။
အဲ့သည်အချက်ကြောင့် Atlantis မြို့ ကြီး နစ်မြုပ်ခဲ့သလို Noah ရဲ့ လှေကြီးတစ်ခုပဲ ရေပေါ်မှာ ရှိခဲ့တုန်းကလို အခြေ အနေမျိုး ၂၀၁၂ နောင်းပိုင်းမှာ ပြန်ဖြစ်လာပါမယ်။ ကျနော် တို့မှာ ရှောင်လွှဲစရာ နည်းလမ်း မရှိပါဘူး။ နေစရာ ကမ္ဘာ တစ်ခုပဲ ရှိတဲ့ အတွက် မလွဲ မသွေ ရင်ဆိုင် ရပါ လိမ့်မယ်။ Stonehenge နဲ့ Easter Island အကြောင်း ကျနော်တို့ ဘာလို့ မသိ တာလဲ။ ဖြစ်နိုင်တာက အရင်က လူတွေ တည်ဆောက် ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Nibiru ကြောင့် သူတို့အားလုံး သေဆုံး သွားတဲ့ အခါ အသစ် ဖြစ်လာတဲ့ ကျနော်တို့က မသိတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Nibiru ဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ် မေလ ၁၅ ရက်နေ့မှာ အနီရောင် အရာဝတ္ထု အဖြစ် သာမာန် မျက်လုံးနဲ့ မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သူဟာ အပေါ်ကို တက်လာနေတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကမ္ဘာ့ တောင်ဘက် အဖျားပိုင်းတွေမှာသာ မြင်နိုင်မှာပါ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မေလလောက်မှာတော့ သူဟာ ကမ္ဘာပေါ်က လူတွေ အားလုံးမြင်နိုင်လောက်တဲ့ အရွယ်အစားဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒုတိယမြောက် နေတစ်လုံး အဖြစ် လရဲ့ အရွယ်အစား လောက် ရှိတဲ့ သူ့ကို မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ကြီးမားလှတဲ့ ဆွဲငင်အားကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ငလျှင် အကြီးအကျယ် လှုပ်ပြီး ရေကြီးမှုတွေ နေရာ အနှံ့ ဖြစ်ပါမယ်။ ဒါပေမယ့် အဆိုးဆုံး အခြေအနေက ၂၀၁၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက် ဖြစ်ပြီးတော့ အဲဒီ နေ့မှာ ကမ္ဘာဟာ Nibiru နဲ့ နေရဲ့ အကြားကို ရောက်ပါမယ်။
ဆန့်ကျင် ဆွဲငင်အားတွေကြောင့် ကမ္ဘာမှာ pole shifting အကြီးအကျယ်ဖြစ်ပြီး အဲဒီဖြစ်ရပ်က ကမ္ဘာကို အသစ် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်း စေမှာပါ။ Nibiru ဟာ ကမ္ဘာ လည်ပါတ်မှုနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် လားရာကို လည်နေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မျက်နှာပြင် ဆွဲငင်အား က ကမ္ဘာကြီးကို ၃ရက်တိတိ လည်ပါတ်မှု ရပ်သွားစေပါမယ်။
အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ ငလျှင်ကြီးတွေ လှုပ်မယ်၊ မြေပြန့်တွေ အစိတ်စိတ် အပိုင်းပိုင်း ကွဲထွက် ပြီး ကျောက်ရည်ပူတွေ တိုးထွက်မယ်၊ မီးတောင်တွေ နေရာအနှံ့ ပေါက်ကွဲမယ်၊ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ သန်း ရာပေါင်း အနည်းငယ်သာ အသက်ရှင် ကျန်ပါမယ်။ အဲဒီနောက် ကမ္ဘာကြီးဟာ ဖြေးဖြေးချင်း အသစ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပါလိမ့်မယ်။ 2014 July 1 ရက်နေ့က စပြီး Nibiru ဟာ ကျနော် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘာသက်ရောက်မှုမှ မရှိတော့ပဲ ကျနော်တို့နဲ့ ဝေးရာ စကြာဝဠာဆီကိုပြန်လည် ထွက်ခွါသွားပါလိမ့်မယ်။
အရာအားလုံးသည် သင်္ခါရ ဆိုပေမဲ့ ၂၀၁၂ ဆိုတာ တော့ တော်တော်ကြီးများ စောလွန်း နေမလားလို့။ အခုစာလာ ဖတ်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေ ရော..
Log in to Reply	တစ်ကမ္ဘာလုံးက သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ကြားမှာရော၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကြားမှာရော၊ တယ်လီပသီပညာရှင်တွေကြားမှာရော ၂ဝ၁၂ ပြဿနာကို တော်တော်လေးဘဲ ငြင်းကြ/ခုန်ကြ အမျိုးမျိုး ဝေဘန်ချက်တွေပေးကြနဲ့ လုပ်ကြတာ ကျနော်ဖတ်ခဲ့ဘူးပြီးပါပြီ။ ဘာမြူဒါ တြိဂံဒေသက အတ္တလန္တတစ်မြို့ကြီးရဲ့ လမ်းတွေ ပင်လယ်အောက်မှာ တွေ့တာ၊ ရှေးဟောင်းလူသားတွေရဲ့ သိပ္ပပညာတိုးတက်မှုတွေကို နံရံပန်းချီတွေမှာတွေ့ရတာ၊ အဲဒီ ဘာမြူဒါတြိဂံဒေသက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ရာကျော်ပတ်ဝန်းကျင် ကာလမှာ လေယာဉ်တွေ၊ သင်္ဘောတွေ ထူးထူးဆန်းဆန်းပျောက်ကွယ်သွားတာ၊ အဲဒီ ဘာမြူဒါတြိဂံဒေသဟာ သူ့ရဲ့ ကျောဘက်အခြမ်း – ဂျပန် တစ္ဆေပင်လယ်နဲ့ တစ်ထပ်တည်းကျနေတာ စသည်ဖြင့် ထူးခြားဆန်းကျယ်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ အနေနဲ့ စာအုပ်တော်တော်များများမှာလဲ ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။
အခု ခေတ်စားလာတာက Nibiru ပါဘဲ၊ ဒီကြားထဲ ဘီတဲလ်ဂျူးစ် ကြယ်ကြီးပေါက်ကွဲမဲ့ ကိစ္စကိုလဲ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ အငြင်းပွားကြပြန်ပါတယ်။ ဒီပြဿနာတွေ-ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေဟာ ဒီကနေ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေလို လက်ဆုပ်လက်ကိုင် ပြနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ – ဒီဒေသမှာတော့ ရေကြီးတာ – ဘယ်လောက်လူတွေ သေတယ် – စတုရန်းပေဘယ်လောက်အထိ ရေပြင်ကျယ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်၊ ငလျှင်လှုပ်လိုက်တာ ဘယ်လောက်ပြင်းထန်လို့ အိမ်ဘယ်နှစ်လုံး ပြိုသွားပြီး၊ လူဘယ်နှစ်ဦးသေတယ်ဆိုတာ မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့နိုင်/ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ အခုလို သိပ္ပံပညာလွန် ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ တကယ်ဖြစ်လာရင်တော့ အနုမြူဗုံးကြဲချတဲ့အချိန် အဲဒီ ကြဲအချခံရတဲ့ မြို့/ဒေသ အလယ်ခါင်မှာ နေတဲ့လူတစ်ယောက်လိုဘဲ ဘာမှ သိလိုက်မယ် မထင်ပါဘူး။ ရုပ်ရှင်တွေထဲကလို အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အရာဝတ္ထုကြီးချဉ်းကပ်လာတာကို ကြည့်ပြီး ရင်ထိတ်သည်းဖိုဖြစ်ရမဲ့ ခံစားချက်လဲ ရလိမ့်မယ် မထင်ပါဘူး။ ဒီနေ့ သိပ္ပံပညာတွေ ထွန်းကားနေကြတဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေကတောင်မှ ဖြေရှင်းနိုင်မဲ့ နည်းလမ်း ရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင် ကျနော်တို့က ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိ ဖြစ်လာနိုင်မယ်ဆိုတာ တွေးပြီး ရင်ထိတ်သည်းဖိုနဲ့ အိပ်မက်တွေ မက်နေမဲ့အစား လာမဲ့ဘေး ပြေးတွေ့ကြည့်လိုက်တာပေါ့ဗျာ ဟဲဟဲ ….
Log in to Reply	ဘာကြောင့် Betelguese ကြယ်အိုကြီးပေါက်ကွဲတော့မည်ဟု သိပ္ပံပညာရှင်များအကြား ငြင်းခုံမှုတွေ ဖြစ်လာရပါသနည်း?
ယခုတစ်ခါ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်တွင် နေ၏စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ ပေါက်ကွဲမှုများကြောင့် ကမ္ဘာကြီးအားချိနဲ့ သွားစေလိမ့်မည်ဆိုသည့် သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာပြန်သည်။
ထိုသို့ငြင်းခုံနေကြသည်မှာ ကြာပြီဟု သိရပါသည်၊ အောက်ပါဆောင်းပါးအရ သက္ကရာဇ် ၁၉ဝဝ ပြည့်နှစ်ကတည်းက ပေါက်ကွဲလိမ့်မည်ဟု သတ်မှတ်ထားခဲ့သော်လည်း ယခုတိုင် ပေါက်ကွဲမှု မဖြစ်သေးပဲ ဆက်လက်ရပ်တည်နေကြောင်း တွေ့ရသည် ဟု ဆိုပါသည်။ ကြယ်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ် ၃ ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းနှင့် AD – ၁ဝ၅၄ ခုနှစ်၊ AD – ၁၅၇၂ ခုနှစ်နှင့် AD – ၁၆ဝ၄ ခုနှစ်တို့တွင် ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ နက္ခတ်ပညာရှင်များက Betelguese ကြယ်ကြီးသည် သက်တမ်း နှစ်ပေါင်း ၁ဝ သန်းရှိပြီဖြစ်သည့် တစ်ခုတည်းသော ကြယ်အိုကြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ကမ္ဘာမှ အလင်းနှစ် ၄၉၇ မှ ၇၈၉ နှစ်ကွာဝေးကြောင်း link တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။
ကြယ်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဆိုပါက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယင်းဖြစ်စဉ်မျိုး မတွေ့မြင်နိုင်
ယခုရက်ပိုင်း အွန်လိုင်းပေါ်၌ ခေတ်စားလာသော ကြယ်ပေါက်ကွဲမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် Orion Constellation (အဒြက္ခတ်ကြယ်စု) သည် အနောက်တိုင်း အခေါ်အဝေါ်အရ (Betelgeuse) ကြယ်၊ မြန်မာအခေါ်အဝေါ်အရ (အဒြကြယ်) သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ဖြစ်စဉ်သည်) ကောင်းကင် နက္ခတ်သိပ္ပံပညာမကျဘဲ ထင်ကြေးပေးနေတာဖြစ်ကြောင်း နက္ခတ်သိပ္ပံမှ အမှုဆောင် အဖွဲ့ချုပ်ဦးဇေယျာကိုကပြောသည်။ “ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံနက္ခတ်အဖွဲ့စုံက သုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင် (Betelgeuse)ကြယ်ဟာ အဒြကြယ်စုထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ကြယ် (၇)လုံး အနက်က တစ်လုံးဖြစ်။ အဒြကြယ်စုကြီးထဲမှာ အလင်းရောင် တောက်ပတဲ့ ကြယ်စု ၂ ခုရှိပြီး သာမန်ကြယ်(၅)ခု ပါဝင်တယ်။ အလင်းရောင်တောက်ပတဲ့ ကြယ် (၁)ခုက Betelgeuse ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခုက (Rigen) ကြယ်လို့ ခေါ်တယ်။ (Betelgeuse)ကြယ်က အဓိကဖြစ်တဲ့အတွက် အလင်းအား ဝ၉ ရှိပြီး အနီရောင်ဘက်ကို သန်းနေတယ်။ နေထက်အချင်းက အပေါင်း ၄ဝဝ ပိုရှည်ပြီး အဆ ၃၆ဝဝ ပိုပြီးတောက်ပတယ်။ ကမ္ဘာက နေအလင်းနှစ်ပေါင်း ၄၂၇၅ အလင်းနစ် အကွာအဝေးမှာရှိတယ်။ အလင်းနစ် ၁နှစ်ဟာ မိုင်သန်းပေါင်း ၆ သန်း ရှိပါတယ်။ (Betelgeuse) ကြယ်တည်ရှိတဲ့ အဒြနက္ခတ်ကြယ်စုကို အနောက်တိုင်းက မုဆိုးကြယ်စုလို့ခေါ်ပြီး အရှေ့တိုင်းနဲ့ မြန်မာ့နက္ခတ်ပညာရှင်တွေက လိပ်ကြယ်စုလို့ ခေါ်တယ်။ အဓိကဇာတ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ Betelgeuse ကြယ်ဟာမုဆိုးကြယ်ကြီးရဲ့ လက်ယာချိုင့်ကြယ်အဖြစ် ရပ်တည်နေတယ်။ ဒီကြယ်ဟာ အရွယ်အစား ကြီးမားတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဧရာမကြယ်ဘီလူးဆိုပြီး သတ်မှတ်တယ်။ မေထုန်ရာသီရဲ့ဝ၉ ဒီဂရီ ၅၃ မိနစ်မှာ တည်ရှိမှာဖြစ်ပြီး မြောက်လတ္တီတွဒ် ဝ၇ ဒီဂရီ ၂၄ မိနစ်ရပ်တည်မှာဖြစ်တယ်။ ကြယ်ရပ်တည်တဲ့ သက်တမ်းဟာ နှစ်သန်းပေါင်း ၁ဝ သန်းကနေ သန်း ၂ဝ ထိ ရပ်တည်တယ်။ ချွင်းချက်အနေနဲ့ တချို့ကြယ်တွေဆိုရင် ထောင်ချီပြီး ရပ်တည်နေတာ တွေ့ရတယ်”လို့ ၎င်းကဆိုသည်။
နက္ခပညာရပ်၌ ပေါက်ကွဲခါနီးကြယ်ကြီးကို No Bustar လို့ ခေါ်ကာ အရွယ်အစား အရမ်းကြီးမား သည့်ကြယ်ကို Super Nobastar လို့ ခေါ်ပြီး (Betelgeuse) စကြယ်သည် ဧရာမကြယ်ဘီလူးကြီး Super Nobastar ထဲတွင် ပါဝင်ကြောင်းသိရသည်။ ကြယ်များ၏ ဘဝနိဂုံးဖြစ်စဉ် (Exploding Super)သည် ကြယ်တွေ၏ အသက်ဆက်ရှင် နေထိုင်နိုင်သည့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓါတ်အားလုံးကို မပြောင်းလဲဘဲ ဆက်ရှင်သန်နိုင်သည့် ကာလသတ်မှတ်ပြီး ပုံမှန်မဟုတ်သည့် ဖောက်ပြန်လာချိန်တွင် အလင်းရောင်ပိုပြီး တောက်ပလာကာ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ အလင်းရောင်ကွာခြားလာ ကောင်းကင်ရှိကြယ်များကို တွက်ချက်တိုင်းတာသည့် ပညာရှင်ကို (Cosmology)အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ကောင်းကင်နက္ခတ်ပညာဖြင့် ဟောပြောအကြံပြု လမ်းညွှန်ပညာရှင်ကို (Cosmologer) အဖြစ် သတ်မှတ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါကြယ်များ၏ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ကို ဘယ်ပညာရှင်မှ မတွက်ချက်နိုင်ဘဲ နောက်နောင်လဲ တွက်ချက်နိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။ ၎င်းကြယ်ဘီလူးကို AD- 1900 ခုနှစ်ထဲက ပေါက်ကွဲမည်ဟု သတ်မှတ်ထားပြီး အခုချိန်ထိ ရပ်တည်နေတာတွေ့ရကာ ကြယ်ပေါက်ကွဲခဲ့သည့် ပထမဖြစ်စဉ်ကို AD- ၁ဝ၅၄ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံတွင် သတ်မှတ်၍ ဒုတိယဖြစ်စဉ်ကို AD-၁၅၇၂ ခုနှစ်၌ ဥရောပတိုက်၏ ပညာရှင်များ မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး တတိယဖြစ်စဉ်ကို AD-၁၆ဝ၄ ခုနှစ်တွင် ဂျာမနီနိုင်ငံမှ ပညာရှင်များက လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါကြယ်သည် အဒြကြယ်စုထဲ၌ ရပ်တည်နေသည့် ကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် မလွဲမသွေ ပေါက်ကွဲလာမည်ဆိုပါက အဒြနက္ခတ်တာရာကြယ်စု၏ ပညာရပ်ကို ပြန်ပြီးပြုပြင်ရမည့် အခြေအနေများဖြစ်လာနိုင်ကာ မျိုးဆက်သစ် နက္ခတ်ပညာရှင်များ အနေဖြင့် အဒြနက္ခတ်ပညာရပ်ကို ပြန်လည်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖို့ လိုလာမည် ဖြစ်သည်။ အလင်းရောင်သည် နေမင်းသာဖြစ်ပြီး ယင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်လာပါက နေမင်းနှင့် အလင်းနှစ်ပေါင်း ၄ဝဝ ကျော်ကြီး ကွာဝေးသည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခုဖြစ်စဉ်ကို တွေ့ရမည်မဟုတ်ကြောင်း ထပ်မံသိရသည်။
Log in to Reply	ထူးဆန်းသော email မှ သတင်း တခု (ဤအကြောင်းအရာကို ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ၊)
ဦးဝင်းမောင် မှ မြစိမ်းရောင် ဆရာတော်ဘုရားကြီးသို့ ၂၆-၂-၂၀၁၁ နံနက် ၉း၁၀အချိန်လျှောက်ထားချက်— ဆရာတော်ဘုရား တပည့်တော်အား ကမ္ဘာစောင့်နတ်၊သာသနာစောင့်နတ်မျ
ားမှလာရောက်နှိုးဆော်တိုင်တွန်းမှုကြောင့်ဆရာတော်အားလာရောက်လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်ဘုရား။ ၂၀၁၁ ခု မတ်လလယ်လောက်မှစ၍ ငလျင်များစတင် လှုပ်ရှားမှာဖြစ်ကြောင်းအဓိက အနေနှင့် စစ်ကိုင်း၊တောင်ငူ၊ပဲခူး စသည့်မြို့များဖြစ်ကြောင်း၊တန်ခိုးကြီးဘုရားစေတီများ မပျက်စီးစေရန်သာသနာစောင့်နတ်မင်းများအား စောင့်ကြပ်စေခဲ့ကြောင်း၊ မြန်မာပြည်ရှိရဟန်းရှင်လူများ မထိခိုက်မပျက်စီးစေရန်တိုင်းနယ်များရှိမြို့ကြီးများသို့ မိမိအားစေလွှတ်၍ အစီအမံများကို ဆောင်ရွက်ခိုင်းကြောင်းမိမိလုပ်ဆောင်သည့်နေရာမြို့များမှ မြေထက်သို့(၄)မိုင် မြေပေါ်သို့ဗဟိုချက်မှ (၃၉၀)မိုင် အန္တရာယ်ကင်းသက်ရောက်စေပါကြောင်း။ မြန်မာပြည်ကြီးအန္တရာယ်မှကင်းဝေးစေရန် ဆရာတော်၊သံဃာတော်များမှ မြန်မာနိုင်ငံနယ်နမိတ်တစ်လျှောက် လေယာဉ်ဖြင့် ပဋ္ဌာန်း၊ပရိတ်၊မေတ္တာများ ရွတ်ဖတ်သရဇယ်ပါက ၂၀ ပုံ ၁ပုံခန့် သာ အန္တရာယ်ကျရောက်စေမှာဖြစ်သည့်အတွက် ဆရာတော်ဘုရားအားလျှောက်ထားပါကြောင်း၊ ၂၀၁၁ ဧပြီလတွင် မြောင်းမြ၊ ပုသိမ်၊ဖျာပုံစသည့်မြို့များမှာ မထင်မှတ်ဘဲ ရေကြိးနိုင်ပါကြောင်း၊ ၂၀၁၂ ခု ဒီဇင်ဘာလမှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မတ်လအထိ ကာလသည်အလွန်အရေးကြီးပါကြောင်း၊ နေနှင့်ကမ္ဘာကြားသုိ့ ဂြိုဟ်ကြီးတစ်လုံးဖြတ်သန်းမှာဖြစ်ပါကြောင်း ၊၄င်းဂြိုဟ်သည်အပူရှိန်ပြင်းထန်လွန်းသောကြောင့် ကမ္ဘာကြီးသည်ငလျင်လှုပ်၊မီးတောင်များပေါက်ကွဲပြီး ပြင်းထန်သောဘေးအန္တရာယ်များကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူသန်းပေါင်း(၆၀၀၀)အနက် သန်း(၃၀၀၀)ကျော်(၄၀၀၀)ခန့်သေကြေပျက်စီးမှာဖြစ်ကြောင်း၊ဤကာလတွင်လူများ သီလသမာဓိတည်ဆောက်ပြီး သတ်သတ်လွတ်စားလျှင်ပိုမိုသင့်လျော်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊မြန်မာ၊သီရီလင်္ကာ၊ နီပေါ၊ယိုးဒယား စသည်(၄)နိုင်ငံသာသက်သာရာရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ တပည့်တော် ပုသိမ်၌လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေစဉ်ဦးအောင်မြင့်ဆိုသူ လူတစ်ဥိးရောက်ရှိလာပြီး ဘိုးတော်အောင်မင်းခေါင်မှ၎င်းအား မြစိမ်းရောက်ဆရာတော်ဘုရားသို့ လျှောက်ထားရန်ခိုင်းပါကြောင်း၊မြစိမ်းတောင်ရှိ အဆောက်အဦးများခိုင်ခန့်စွာ တည်ဆောက်ထားရန်ဆန်ဆီဆားဆေး များစုဆောင်းထားရန် လျှောက်ထားခိုင်းကြောင်း။ ယခုသူမလာခင်တပည့်တော်မှ ကြိုတင်လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ၂၀၁၃ ခု ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၄၊၁၅၊၁၆ ရက်များမှာ ကမ္ဘာကြီးသည်လည်ပတ်မှုရပ်ဆိုင်းပြီး အမှောင်ကျမည်ဖြစ်ပါကြောင်းစသည်ဖြင့်လျှောက်ထားပါသည်။ ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှ ဒကာကြီး လျှောက်ထားချက်များဖြစ်နိုင်ပါကြောင်းပြန်လည်မိန့်ကြားပါသည်။ ဒကာကြီးလည်း တောင်ပေါ်သို့လှည့်လည်ပြီးအဆောက်အဦးများ ဆောက်ထားသည်ကို လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ရန်နှင့် ဆန်၊ဆီ၊ဆေး၊ဆားစသည်များ အဆင်သင့် ဆောင်ရွက်ထားပါကြောင်း ပြန်လည်မိန့်ကြားပါသည်။ ဆရာတော်ကြီးမှ ဆက်လက်၍ ယခု မြန်မာသက္ကရာဇ်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲသိလားဟု မေးသည့်အခါ ၁၃၇၂ ခုရှိပါပြီဘုရားလို့ဖြေတဲ့အခါဒကာတို့ကို တဘောင်တစ်ခု ရွတ်ပြမယ်၊ ၈၁ နဲ့ မတင်းတိမ် ၉၀ ခုကိုအရောက်ချိန် မင်းတို့သိကြသလားမေးပြီး နောင် (၁၀)နှစ်နဲ့ နှစ်(၂၀)ကြာရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာအားလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကုန်ပြီးမန္တလေးမြို့အောင်ပင်လယ်ကန်အနီးမှာ ဗုဒ္ဓရာဇာ၊ဗုဒ္ဓစင်္ကြမင်း ပေါ်လာပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာ မင်းတစ်ပါးတည်းသာ အုပ်ချုပ်စိုးစံမှာဖြစ်တယ်လို့မိန့်ကြားပါသည်။ မှတ်ချက်။ ။ ယခုလာရောက်လျှောက်ထားသူ ဦးဝင်းမောင်မှာ၂၀၀၈ ခုနှစ် နာဂစ် မတိုက်ခတ်မီ ၁၀ ရက်ခန့်အလိုတွင် ဆရာတော်အားရန်ကုန်၊ဧရာဝတီ စသည့်နေရာများတွင် ကြီးမားသော မုန်တိုင်းကြီးတိုက်ခတ်ပြီးလူသိန်းချီသေဆုံးမည်အကြောင်း လျှောက်ထားခဲ့ဖူးသည်။ ၁-၃-၂၀၁၁ ခု အင်္ဂါနေ့ နံနက် ၈း၀၀ နာရီအချိန် ဦးဝင်းမောင် မှမိုးဇလပညာရှင် ဒေါက်တာထွန်းလွင် သုံးသပ်ချက်အား ဆက်ကပ်ရာ ဆရာတော်မှ ၂၀၁၂ခုနှစ်သည် အင်မတန်မှ အရေးကြီးကြောင်း၊ ပျက်စီးမှာဖြစ်ကြောင်းမိန့်ကြားသဖြင့် လူအများ ကပ်ဘေးမှ လွတ်မြောက်ရန် မည်သို့ဆောင်ရွက်ရမည်ကိုလျှောက်ထားရာ အန္တရာယ်ဖြစ်ပွါးနိုင်သည့်ရက်များ တွင်ဖယောင်းတိုင်အသေး(၂)တိုင်အား ပူးထွန်း၍ ဘုရား၌ ပူဇော်ပါသားတော်၊သမီးတော်များ အား ကယ်တင်စောင့်ရှောက်ပါရန်နှင့်သဗ္ဗုဗဒ္ဓေဂါထာတော်အား အချိန်ရလျှင် ရသလို ရွတ်ဖတ် ပူဇော်ရန်မိန့်ကြားပါသည်။ (ဟုတ်မဟုတ်အား ကိုယ်တိုင် ကြုံကြားသိမြင်ခြင်းမရှိပါလက်ထဲရောက်လာ၍ ထပ်မံဝေငှပါသည်။ဘုရားတရားသံဃာ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ရန်တိုက်တွန်းချက်များပါ၍ အကျိုးမယုတ်ဟု ယူဆမိပါ၍ ဝေငှခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
အီးမေးလ်ရတာလေး ကို ရှဲလိုက်တာ ..ဟုတ်မဟုတ်ကတော့ ..မသိပါ ။
« နောက်ထပ်လူတွေနေနိုင်သည့် ကမ္ဘာတခုလော အောက်ပိုင်းမှ ပြဿနာရှာခြင်း »	Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum